အစုလိုက်အတွက် testosterone Enanthate အမှုန့်ကိုဝယ် | AASraw
/ဘ‌‌လော့ခ်/testosterone Enanthate/အစုလိုက်အတွက် testosterone Enanthate အမှုန့်ကိုဝယ်
အပေါ် Posted 01 / 27 / 2018 by 阿斯劳 ရေးသားခဲ့သည် testosterone Enanthate.
testosterone Enanthate ကဘာလဲ?
testosterone Enanthate အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်း၏ကုသမှုများအတွက်အသုံးအများဆုံး testosterone တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာစွမ်းဆောင်ရည်များကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်စက်ဝိုင်းလည်းအလွန်ရေပန်းစားသည်။ ဒါကဈေးကွက်တွင်အများဆုံးတတ်နိုင်ဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်ကခေါင်မိုးမှတစ်ဆင့်အများဆုံးအားလုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားနှင့်၎င်း၏ထောက်ပံ့ရေးများကကောင်းစွာသည်းခံအလွန်စွယ်စုံဖြစ်ပါတယ်။
testosterone Enanthate အသုံးပြုမှုအားလုံးအဆင့်ဆင့်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောကြောင်းတစ်ခုဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကပထမဦးဆုံးအကြိမ် Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုသူများအတွက်စုံလင်သောဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကုန်းနှီးအတွက်အချိန်အများကြီးနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အညီအမျှထိရောက်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်အတူသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်လည်းသူတို့ထိနျးခြုပျဖို့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကယ့်ကိုက surprising လျှင်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒြပ်က testosterone ဟော်မုန်းရိုးရှင်းစွာဖွင့်ပေမယ့်ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, တစ်ဦးဟော်မုန်းလူ့ခန္ဓာကိုယ်သာဖို့ကောင်းစွာ-နေသားတကျဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်သာယာဝပြောရေးဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဘာဖြစ်သလဲ testosterone Enanthate အမှုန့်?
အမည်: testosterone Enanthate
အရည်ပျော်မှတ်: 34-39 ℃
သိုလှောင်မှုကို Temp: 2-8 ℃
testosterone Enanthate စက်ဘီးနှင့်အသုံးပြုခြင်း
testosterone Enanthate သံသရာကိုလည်းဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အဆီဆုံးရှုံးမှုသံသရာအတွက်အလွန်တိကျသောထုံးစံ၌အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်သော်လည်းများသောအားဖြင့်သဘာဝရရှိမှုတစ် bulk သို့မဟုတ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်၏ဖြစ်ကြသည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရရှိမှုသို့မဟုတ် bulking အဘို့, testosterone Enanthate များသောအားဖြင့်မြင့်မားသောက်သုံးသော (တစ်ပတ်ကို 500mg ၏များသောအားဖြင့်နိမ့်ဆုံး) တွင်အလုပ်လုပ်သည်, အဲဒါကိုမှ affixed ရှည် Ester နဲ့ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့်, ပတ်လည်တစ်ဦးမဟုတ်တော့ဝက်ဘဝကိုပြပါလိမ့်မယ်7- 10 ရက်, ထို့ကြောင့် testosterone Enanthate သံသရာများသောအားဖြင့် 10 ၏ကာလအဘို့အပြေးကြသည် - 12 ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်တော့ဘူး။
နှစ်ဦးစလုံး bulking နှင့်ဖြတ်တောက်သံသရာများတွင် testosterone Enanthate လေ့အသုံးပြုသူရဲ့အဆုံးရည်မှန်းချက် (bulking, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရရှိမှု, ဒါမှမဟုတ်အဆီဆုံးရှုံးမှု) လွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့သဘောသဘာဝ၏အခြားဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူ stacked ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, များသောအားဖြင့် bulking ၏ရည်ရွယ်ချက် testosterone Enanthate သံသရာ Dianabol များသောအားဖြင့်တစ်ကန်-စတင်ဒြပ်ပေါင်းအဖြစ်ပထမဦးဆုံး6ပတ်ပြေးသည်အဘယ်မှာရှိ Deca-Durabolin (Nandrolone Decanoate) နှင့် / သို့မဟုတ် Dianabol (Methandrostenolone) ၏အသုံးပြုမှုကိုပါဝင်သည်။
testosterone Enanthate သံသရာဖြတ်တောက်သို့မဟုတ်အဆီဆုံးရှုံးမှုသံသရာသောဖြစ်ရပ်မှာတော့ testosterone Enanthate များသောအားဖြင့်အလွန်နိမ့် TRT (testosterone အစားထိုးကုထုံး) မှာ run ဖြစ်ပါတယ်တစ်ပတ်ကို 100mg န်းကျင်၏သောက်သုံးသောဖြတ်တောက်နှင့်အဆီဆုံးရှုံးမှုပိုမိုဦးစားပေးမည်သည်အခြားဒြပ်ပေါင်းများသံသရာစဉ်အတွင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်နေကြသည်နေတုန်း ။ ဒီသောက်သုံးသောမှာ testosterone Enanthate များအသုံးပြုမှုမျှသာသာမန်ကိုယ်ထင်ရှား function ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ထက်အကျိုးအမြတ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ကိုအလေးပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
၏သောက်သုံးသော ကုန်ကြမ်း testosterone Enanthate အမှုန့်:
အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းဆက်ဆံဖို့, စံ testosterone Enanthate ဆေးများအသုံးအများဆုံးတိုင်း 100-200 နေ့ကအကွာအဝေးဟာ 7-10mg ကျပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အချို့ဆေးသမားစုစုပေါင်းထိုးတက်ကွဲမှုသည်ငါးရက်ကစီမံခန့်ခွဲမည်ဖြစ်သည်။ US မှာလျော့နည်းဘုံအချို့သောဆေးသမားတိုင်း 200 ရက်သတ္တပတ်တိုင်း 400-2 ရက်သတ္တပတ် 3-4mg ၏ဆေးများသတ်မှတ်နှင့်အချို့သောကိစ္စများတွင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်အလွန်မတတ်နိုင်သောပေမယ့်အချို့ကိုလိုက်နာတဲ့အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကုသမှု၏စုစုပေါင်းကြာချိန်အစဉျအမွဲရှိလိမ့်မည်။ အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းကုသမှုလိုအပ်နေသူအများစုမှာအမျိုးသားများအသက်အဘို့အလိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီအနှောင့်အယှက်အသံပေမယ့်အရေးပါတဲ့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမည်အကြောင်း, သငျသညျအစားအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းကနေဆငျးရဲဒုက်ခသို့မဟုတ်ပြုမူဆက်ဆံမလဲ
တစ်ဦးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့် setting ကိုခုနှစ်တွင်ဘုံ testosterone Enanthate ဆေးများရက်သတ္တပတ်အကွာအဝေးလျင် 200-500mg ကျပါလိမ့်မယ်။ ဟော်မုန်းသာသည်အခြားဟိုစတီရွိုက်များအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သဘာဝက testosterone ဟော်မုန်းဖိနှိပ်မှုတိုက်ဖျက်ဖို့အသုံးပြုခံရလျှင်တစ်ပတ်ကို 200-250mg အလွန်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မှန်သောဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အများဆုံးယောက်ျားတစ်ပတ်ကို 400-500mg အလွန်အမင်းထိရောက်သောနှင့်ထိန်းချုပ်ဖို့အလွန်လွယ်ကူဖြစ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့သောဆေးများပုံမှန်အားဖြင့်စုစုပေါင်းအပတ်စဉ်ထိုးဘို့တစ်ပတ်ကိုနှစ်ခုညီမျှဆေးများသို့ခွဲထွက်လိမ့်မည်။ ဆေးများတစ်ပတ်ကို 500mg ထက်ပိုမိုမြင့်မားသွားနိုင်ပါတယ်; သို့သော်များစွာသောလူတို့သညျ 500mg အကွာအဝေးသူတို့လိုအပ်သမျှဖြစ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ပိုပြီးဆန္ဒရှိလျှင်, များစွာသောလူတို့သညျတစ်ပတ်ကို 600-1,000mg သည်းခံနှင့်ထိန်းချုပ်ထားပေမယ့် 1,000mg အမှတ်အသားချဉ်းကပ်သည်ဟုဆေးများကိုအလွန်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွါးစေနိုင်ပါတယ်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက် testosterone ဟော်မုန်းသည်လူကိုသည်းခံနိုင်ပါတယ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုနောက်တစ်နေ့မှတယောက်သောသူကနေကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အများဆုံးယောက်ျားတစ်ပတ်ကို 1,000mg အထက်တွင်ဆေးများအချို့သော level မှာအာမခံချက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအားလုံးရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
မည်သို့ပင်အသုံးပြုမှုကိုသင့်ရဲ့ရညျရှယျ, testosterone Enanthate အားလုံးဟိုစတီရွိုက်နှင့်အတူကောင်းစွာ stacks ။ အခြား testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူကသီးနှံများကိုပုံစရာအကြောင်းမရှိသို့သော်ရှိပါသည်။ ဤသည်အများဆုံးကိစ္စများတွင်အဓိပ္ပာယ်မဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ရိုးရှင်းစွာအပါဆုံးထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုမှုများ၏အလိုရှိသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အခြား steroids ကိုရွေးချယ်ပါ။
testosterone Enanthate သုံးသပ်ချက်များ:
testosterone Enanthate အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လည်းအားလုံးအချိန်အကြီးမြတ်ဆုံးဟို steroids တဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်သည်နှင့်အများဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူတို့တွင်သည်းခံ၏အလွန်မြင့်မားသောအဆင့်သယ်ဆောင်။ တစ်ဦးကုထုံးအေးဂျင့်အဖြစ်, testosterone Enanthate ၏အသုံးပြုမှုကိုအခြေခံကျကျသင်၏အသက်တာပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသူသည်နောက်တဖန်မိမိအနှစ်ဆယ်ကျော်အတွင်းဖွင့်နဲ့တူနေတဲ့လူလတ်ပိုင်းလူကိုခံစားရရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်သမျှထက်ပိုပါတယ်။ ဘဝပြန်လာဘို့မိမိအ zest နှင့်ဇွဲထက်သန်ကြလိမ့်မည်ကိုသူကျန်းမာခြုံငုံဖြစ်လိမ့်မည်သာ။
များစွာသောသူတို့၏ testosterone Enanthate နှင့်အတူအခြားအဟို steroids သီးနှံများကိုပုံပါလိမ့်မယ်နေစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်စွမ်းရည်မှာ, တစ်ဦးတည်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကအားလုံး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တစ်ဦးကောင်အတွက်အစွန်းရောက်အပြောင်းအလဲများမြှင့်တင်ရန်နိုငျသောအခြေစိုက်စခန်းအခြေခံဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့နှင့်မှတ်သားဖွယ်အသွင်ပြောင်းရရှိရန် supraphysiological ဆေးများယူပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်စရာတံခါးခုံကိုအလွန်မြင့်မားနေဆဲဖြစ်သည်။ အညီအမျှအရေးကြီးသော, ဒီ Steroid တစ်မျိုး၏စျေးနှုန်းတတ်နိုင်တာထက်ပိုပြီးအဲဒါကိုပြီးသားရှိပါတယ်ထက် ပို. ပင်အယူခံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လွန်စွာထိရောက်သောနေစဉ်။ မည်သို့ပင်အတွေ့အကြုံသင့်အဆင့်သင် testosterone Enanthate မှားမသွားနိုင်ပါ။
ဘယ်မှာမှ အွန်လိုင်း testosterone Enanthate အမှုန့်ကိုဝယ်?
သင်အွန်လိုင်းအများအပြား Trenbolone Acetate အမှုန့်အရင်းအမြစ်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, သို့သော်အွန်လိုင်းစစ်မှန်သော Trenbolone Acetate အမှုန့်ကိုဝယ်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ စျေးကွက်မှာအတုထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းအများအပြားသတင်းရင်းမြစ်ရှိပါတယ်။ သင်အွန်လိုင်း Trenbolone Acetate အမှုန့်ကိုဝယ်သည့်အခါဒါသငျသညျတခုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် realiable အရင်းအမြစ်.
အားသာချက် testosterone Enanthate အမှုန့်ကိုဝယ် AASraw ထံမှ:
2) Rich အားလုံး Steroid တစ်မျိုးကုန်ကြမ်းပို့ဆောင်သူအာမခံချက်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့သတိပညာရှိတင်ပို့ခဲ့ရတယျ။ အမျိုးမျိုးသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများ, သင်၏တစ်ဦးချင်းစီလိပ်စာအဆိုအရရှေးခယျြမှုကအကောင်းဆုံးတည်း။
ဘေးကင်းလုံခြုံပေးပို့၏ 3) မြင့်အောင်မြင်စွာမှုနှုန်း 95% အထက်ဖြစ်ပါတယ်။
စတီရွိုက်အမှုန့်အဘို့ 4) Delivery အချိန်: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ 3-5 အလုပ်လုပ်ရက်နှင့် 4-6 အီးယူနိုင်ငံများသို့ရက်ပေါင်းအလုပ်လုပ်။
3 ။ ငါတို့သည်ဤလောကတစ်လျှောက်လုံး clients များရှိ
Tags: testosterone ဟော်မုန်း enanthate အမှုန့်
9760 Views စာ
ကနေ testosterone propionate အမှုန့်ဖို့အဓိပ္ပါယ်လမ်းညွှန်	Methenolone Enanthate အမှုန့်ကိုဝယ်: သင်ကဤသိကြရှေ့မှာမဝယ်ကြဘူး !!!